-xameyn la'aanta oo aan wax tarin-
Waxaan aaminsanahay in dhar raaxo leh aysan aheyn inay noqdaan kuwo caajis ah.Calaamadeena maaha halkan in aan u sheegno haweenka sida loo xareeyo waxyaabaha. Waa wax walba oo ku saabsan heerarka raaxada ee macaamiisha iyo qaabka ay ujeedadu tahay inay gudbiso. Sidaa darteed, wax kasta oo ka sarreeya, waxaan dooneynaa inaan isku keenno calaamadeena si aan u muujinno in dharka uu noqon karo mid aad u raaxo leh oo aan caadi aheyn waqti isku mid ah.
-Kaalmeed isboorti ah-
Waxaa naga go'an inaan si joogta ah u soo bandhigno waxyaabo cusub, cusub oo aan caadi ahayn. Laga soo bilaabo doorashooyin waaweyn oo ah dharka quruxda leh ee ku raaxeysta heer sare oo raaxo leh kabaha ugu fiican ee ku haboon, aad hubaal tahay inaad kor u qaaddo fasalkaaga iyo xuruufta alaabadeena.
-Falalka qaababka kala duwan-
Dharka boggayaga ayaa ka tarjumaya shakhsiyaddeena, kooxda kala duwan, iyo dhadhanka firfircoon. Kooxdayadu waxay ka kooban yihiin shakhsiyaad ka soo jeeda asal kala duwan oo leh hiwaayado kala duwan, sidaa daraadeed waxaan dooneynaa in aan isku dhajino qaabab kala duwan oo si buuxda loogu daboolayo dhammaan dadka.
Riix Halkan si aad u akhrido qiimaha shirkadda ama booqo annaga Boggaoo soo hel wax soo saarkeena gaarka ah!